Maalin: Janaayo 9, 2018
Waxaa la sheegay in TCDD Taşımacılık A.Ş. in mudnaanta la siinayo gaaska dhuxusha si loo gaarsiiyo goobaha gaarsiinta ee go'aanka ku saabsan gargaarka kuleylka ah ee qoysaska u baahan, laguna daabacay arrinta hadda rasmiga ah ee Gazette. Golaha Wasiirrada [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu sheegay in howsha helitaanka shahaadooyinka SRC ee loogu talagalay darawalada gawaarida ganacsiga, mararka qaar la kordhiyo illaa 45 maalmood, hadda waxaa lagu fuliyaa 5 daqiiqo laga bilaabo Iridda Dowladda. [More ...]
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta. Marmaray madaarka, dhibaatada taraafikada ee Mahmutbey ee ka socota xawaaraha xawaaraha sare ee Sivas ayaa siisay war wanaagsan. Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Cusmaan Aşkın Bak ee Ciyaaraha Olombikada [More ...]
Faahfaahinta mashruuca Kanal ee Istanbul
Mid ka mid ah mashruuca Rafaa Turkey ayaa goolka 2023 1 for Canal Istanbul / 100 qorshe wadada iyo dhismaha reserve kun yimaa-ayaa lagu soo gabagabeeyey. si gaar ah goostay oo dhan faahfaahinta mashruuca wejiga ka daadanayo Turkiga. Qorshahii ugu dambeeyay [More ...]
Agaasinka guud ee PTT AŞ: süreç Nidaamka ku saabsan qorista 750 shaqaale ah oo la qorsheeyay in loo qaado PTT AŞ waxay bilaabatay 8da Janaayo 2018. ada Bayaan ay soo saartay PTT AŞ, shirkaddu waxay qorsheyneysay inay daboosho baahiyaha shaqaalaha shirkadda 2017. [More ...]
50 kun oo shaqaale hoos imaad ah oo ka shaqeeya Shirkadaha Ganacsiga Gobolka ayaa dalbaday in la qoro. Codsiyada oo bilaabanaya bisha Janaayo ee ku xigta Go'aanka-Sharciga (Sharciga), kaasoo u oggolaanaya shaqaalaha qandaraas hoosaadka la shaqaaleysiinayo [More ...]
Daraasado farsamo oo ka socda Konya Metro
Kuxigeenka AK Party Konya Ömer Ünal ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay madaxweynenimda gobolka in daraasadihii suurta galka ahaa ee ku saabsanaa metro Konya. Unal waxay bixisay macluumaad ku saabsan mashaariicda kale ee socda ee ka socda Konya, “Konya metro [More ...]
Kuxigeenka CHP Balıkesir iyo Lataliyaha Madaxa Ahmet Akın waxay soo jeediyeen inuu ka jawaabo Wasiirka Gadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta oo ku saabsan socodka dheer ee buundooyinka iyo wadooyinka waaweyn. Mood-dhiska-ku-wareejinta moodelka dhaqdhaqaaqa Akın [More ...]
Dhibaatooyinka shaqaalaha ayaa sii kordhaya IZBAN
IZBAN, oo leh qaab dhismeed wadajir ah, ma aysan helin codsi shaqaale qandaraasleyaal nadiifiye ah ka dib saraakiisha amniga ee gaarka loo leeyahay. Xafiisyada wakaaladdu ma aysan aqbalin soo gudbinta shaqaalaha hoos ku qoran ee shaqaalaha. TCDD iyo [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha: Dhaqaalaha Maalgashiga wuxuu sii wadi doonaa 2018 isaga oo aan hoos u dhicin Bakan
Arinta bisha Janaayo ee Raillife, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay "Maalgashigu wuxuu kusii nagaan doonaa 2018". Waa tan maqaalka Wasiir Arslan 2017 aan bilownay sanadkii ka hor [More ...]
İsa ApaydınSoo dhawoow Sannadka Cusub
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydınwaxaa lagu daabacay joornaalkii bishii hore ee majaladda Raillife oo cinwaan looga dhigay "Ku Soo Dhawow Sannadka Cusub". Waa tan maqaalka TCDD GENERAL MANAGER ISA APAYDIN ​​nabad gelyo 2017, soo dhowow 2018… [More ...]
RayHaber 09.01.2018 Warbixinta Shirka
Qaadashada adeegyada hoyga ee shaqaalaha machadka 4 ee Adeegga Guryaha Guryaha waa la qaadi doonaa Adeega Kirada Gawaarida Laga Yaabaa In La Qaadanayo Khariidadda Ganacsiga Gawaarida (TÜVASAŞ) Adeegga Nadiifinta waa la Qaadi doonaa
Hawlaha kor u kaca ayaa sabab u ah lacagta dayactirka!
Bakanı Waa inaanu kor u qaadnaa, Ulaştırma wuxuu yiri Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, buundada lacag aruurinta ee keentay ficilcelinta. Sababtoo ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan ku maalgelinay dayactirka laba buundo iyo jidad waaweyn illaa hal buundo. [More ...]